တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ အိန်ဒိယတပျမတျော၊ ဒုတိယ ရတေပျဦးစီးခြုပျအား လကျခံတှဆေုံ့ » ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျသညျ အိန်ဒိယတပျမတျော၊ ဒုတိယရတေပျဦးစီးခြုပျ Vice Admiral G Ashok Kumar, AVSM,VSM, VCNS ဦးဆောငျသော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ယနနေံ့နကျပိုငျးတှငျ နပွေညျတျောရှိ ဇယြောသီရိဗိမာနျဧညျ့ခနျးမဆောငျ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
အဆိုပါတှဆေုံ့ပှဲသို့ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ(ရေ) ဗိုလျခြုပျကွီးတငျအောငျစနျးနှငျ့ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြားတကျရောကျကွပွီး အိန်ဒိယတပျမတျော၊ ဒုတိယရတေပျဦးစီးခြုပျနှငျ့အတူ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ အိန်ဒိယ နိုငျငံသံအမတျကွီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြား တကျရောကျကွသညျ။
ထိုသို့တှဆေုံ့ရာတှငျ မွနျမာနိုငျငံနှငျ့ အိန်ဒိယနိုငျငံတို့သညျ ကုနျးမွေ၊ ရေ၊လေ ပိုငျနကျ နယျနိမိတျမြား ထိစပျနပွေီး မိတျဆှကေောငျး မိတျဆှဟေောငျးနိုငျငံမြားဖွဈသညျ့အခွအေနမြေား၊ နှဈနိုငျငံ ရပွေငျနယျနိမိတျ ဆကျစပျလကျြရှိသဖွငျ့ ရပွေငျပိုငျနကျလုံခွုံရေးကို နှဈနိုငျငံ ရတေပျမြား သတငျး အခကျြအလကျမြားဖလှယျ၍ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျနသေညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာ့တပျမတျော အနဖွေငျ့ အိမျနီးခငျြး ၅ နိုငျငံနှငျ့ အိမျနီးခငျြးကောငျး ဖွဈစရေနျ နယျစပျဒသေပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှုလုပျငနျးမြားကို အလေးထားဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနမြေား၊ မွနျမာ့ တပျမတျော(ရေ)အား ခတျေမီတပျမတျော(ရေ)ဖွဈရေး ပူးပေါငျးဆောငျရှကျလကျြရှိသညျ့ အခွအေနေ မြား၊ သငျတနျးသားမြားစလှေတျရေးဆိုငျရာ ကိစ်စရပျမြားနှငျ့ နှဈနိုငျငံရတေပျအခငျြးခငျြး ခဈြကွညျရေး ခရီးစဉျမြားအပွနျအလှနျ လညျပတျခွငျးဖွငျ့ နညျးပညာဖလှယျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ခငျမငျ ရငျးနှီးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
တှဆေုံ့ပှဲအပွီးတှငျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့ အိန်ဒိယတပျမတျော၊ ဒုတိယရတေပျ ဦးစီးခြုပျတို့သညျ အမှတျတရလကျဆောငျပစ်စညျးမြား အပွနျအလှနျ ပေးအပျကွပွီး စုပေါငျးဓာတျပုံ ရိုကျခဲ့ကွသညျ။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် အိန္ဒိယတပ်မတော်၊ ဒုတိယရေတပ်ဦးစီးချုပ် Vice Admiral G Ashok Kumar, AVSM,VSM, VCNS ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိဗိမာန်ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်းနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများတက်ရောက်ကြပြီး အိန္ဒိယတပ်မတော်၊ ဒုတိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Saurabh Kumar နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့သည် ကုန်းမြေ၊ ရေ၊လေ ပိုင်နက် နယ်နိမိတ်များ ထိစပ်နေပြီး မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေဟောင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့်အခြေအနေများ၊ နှစ်နိုင်ငံ ရေပြင်နယ်နိမိတ် ဆက်စပ်လျက်ရှိသဖြင့် ရေပြင်ပိုင်နက်လုံခြုံရေးကို နှစ်နိုင်ငံ ရေတပ်များ သတင်း အချက်အလက်များဖလှယ်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့် အိမ်နီးချင်း ၅ နိုင်ငံနှင့် အိမ်နီးချင်းကောင်း ဖြစ်စေရန် နယ်စပ်ဒေသပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းများကို အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့ တပ်မတော်(ရေ)အား ခေတ်မီတပ်မတော်(ရေ)ဖြစ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေ များ၊ သင်တန်းသားများစေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် နှစ်နိုင်ငံရေတပ်အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရေး ခရီးစဉ်များအပြန်အလှန် လည်ပတ်ခြင်းဖြင့် နည်းပညာဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ခင်မင် ရင်းနှီးစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အိန္ဒိယတပ်မတော်၊ ဒုတိယရေတပ် ဦးစီးချုပ်တို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန် ပေးအပ်ကြပြီး စုပေါင်းဓာတ်ပုံ ရိုက်ခဲ့ကြသည်။